Wholesale 4ft ukanyatsotarisisa kugadzirwa mutsara Mugadziri uye mutengesi | Kusanganisa
Mutsara wese unosanganisira pazasi pezvikamu
1.Iyo yakazara otomatiki matanda kucheka saha -Kucheka hombe saizi matanda mu4ft kana 8ft kana imwe saizi inodiwa. Hapana basa rinodiwa rekuyera nekucheka, muchina uyu une hunyanzvi hwekuenzanisa nekucheka kwemurume.
2.Log inotakura -ichi ichi chinoenderana neye debarker. Iyo danda inoramba iri pamusoro pechinzvimbo pamberi pekukanganisa kumwe kupedzisa. Mushure mekupedzisa kumwe, ipapo rinotevera danda rinenge rasundira pasi kuti riite debarking.
Log debarker -Iye debarke's imwechete roller uye maviri ma roller ndiwo mace mhando izvo zvinoita kuti zvive nyore kubata matanda uye kusimudza iyo debarking kugona. Tine mhando mbiri: 1. yekupwanya modhi iyo inogona kupwanya iyo yakabviswa marara kuitira nyore kutakura uye kushandiswa. 2. yakajairika modhi pasina kupwanya
3. Log loader - izvi zvinowirirana nemuchina wekuchekeresa. Otomatiki mhanya nemushini wepeeling. Hapana chikonzero chekuti vanhu vashande. Sevha mari yevashandi.
4.Auto centralizing system- ino sisitimu yakakosha maitiro ekumhanya zvisina kurongwa. Sisitimu iyi inoona kuti danda iri pakati pemuchina wekuchekeresa kuitira kuti mativi maviri ematanda asvuurwe uye asazokanganisika uye marara.
5.Veneer peeling muchina - Yedu isingakundiki peeling muchina unopetwa kaviri kutyaira uye izvi zvinoita veneer ukobvu uye saizi yakanyatsoita. Yekumhanya inochinjika uye inorema basa uye yakavharwa yakanyudzwa tsono sikuru uye mraba mativi gwara njanji inoita kuti muchina usimbe uye ugadzike uye usanyanya kusakara uye kubvaruka.
Veneer stacker -Iye stacker inogona otomatiki kumhanyisa kumhanya kweye peeling muchina, izvo zvisina kukwana zvigadzirwa zvinogona kurongedzwa kunze otomatiki zvinoenderana nezvinodiwa.Iine mabasa senge Kuverenga otomatiki uye kunotyisa, otomatiki kuendesa.
Kurongedza uye Kuisa
Zvadaro: 8ft & 9ft ukanyatsotarisisa peeling mutsetse